Chaw’ Trip Article | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Cartoon Saw Ngo – Irrawaddy (1)
Maung Yit – NLD, the result of 1990 Election of Burma →
Chaw’ Trip Article
ချော (အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်ဘလော့ဂ်) မှကူးယူပါတယ်။
သြဂုတ် ၂၅၊ ၂၀၁၁
ဒီလို လမ်းမျိုးကို ဖားကန့် လမ်းလို့ခေါ်ပါသည်…
နွေတုန်းက ကျွန်မစီးနေကျ မြစ်ကြီးနား – ဖားကန့် ဗင်ကားခဟာ ၂၅၀၀၀ လောက်သာ ရှိပေမဲ့ ယခု မိုးရာသီမှာတော့ ၅၀၀၀၀ ထိ ၂ဆ ဈေးတက်သွားခဲ့ပါတယ်.. ဖားကန့်အသွားကိုတော့ ဈေးဒီလာက်မရှိပါဘူး.. ၃၀၀၀၀ လောက်ဘဲ ရှိပါတယ်.. အပြန်က ဈေးပိုကြီးပါတယ်.. ကြည့်ရတာ မိုးအခါဆို ဖားကန့်ကနေ ပြန်တဲ့သူတွေ ပိုများလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. လမ်းခရီးဆိုးတဲ့အတွက် ကားစီးရတဲ့ အချိန်လဲ ပိုပြီး ကြာပါတယ်. ခါတိုင်း ၆နာရီ ခရီးကို ၈နာရီ လောက်ထိ ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်.. နွေအခါတုန်းက တည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ ချောင်းကူးတံတား တစ်ချို့ ချောင်းရေထဲ မျှောပါသွားလို့ စက်လှေ၃စီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကူးတို့ဖောင်နဲ့ ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ ကူးခဲ့ရပါတယ်..
ဒီလိုစက်လှေ ၃ စီးပေါ် တင်ထားတဲ့ကုတို့ဖောင်ပါ..
ယခုဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ မြစ်ကြီးနား ဖားကန့်လမ်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်လောက်က လမ်းကိုတော့ လုံးလုံး မမီပါဘူးရှင်.. ယခင်တုန်းခါကတော့ ခါးလောက်ထိ နှစ်တဲ့ ရွံဗွက်တွေနဲ့ ကားသွားလို့မရဘဲ လူနဲ့ နွားလှည်းတို့သာ သွားလို့ရပါတယ်… အဲဒီတုန်းက ဒီလမ်းဒီခရီးကို ၂ရက်၃ရက် လမ်းလျှောက်ပြီး သွားခဲ့ရတာပေါ့… ခုလောက်ဆိုးတာကတော့ ပျင်းတောင် ပျင်းသေး… 🙂
ဒီရွာကလေးကတော့ ကျောက်နီ( ပတ္တမြား) ထွက်တယ်လို့ နံမည်ကျော်တဲ့ နန့်ယားဆိပ်( နန့်ယားကျေးရွာ)ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်.. မြစ်ကြီးနား – ဖားကန့် အသွား ကားနဲ့ ဆိုင်ကယ်များ ခရီးတစ်ထောက် နားကြတဲ့ နေရာလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. စားသောက်ဆိုင် အများအပြားရှိပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ လမ်းမ ရှိတာကြောင့် သာသာယာယာ ရှိသလို ကျောက်နီတူးဖော်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေလည်း ရှိတာကြောင့် စည်ကားပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ နန့်ယားရွာမှာ ထမင်းစားခဲ့ပြီးလို့ ဗိုက်မဆာပေမဲ့ အရင်တစ်ခေါက် ပြန်တုန်းက ထမင်းစားနားတဲ့ လ၀ါးဆိုတဲ့ ကချင်ရွာကလေးမှာ ရှိတဲ့ ကချင်စားသောက်ဆိုင်ကလေးမှာ ကားပြင်ဖို့ ခနနားတော့ နွားနို့ သောက်ဖြစ်အောင် သောက်ခဲ့ပါတယ်…. ဒီရွာက နွားနို့သိပ်ကောင်းတယ်လို့ နံမည်ကြီးပြီး ကားမိုင်းမြို့နဲ့ မနီးမဝေးမှာ ရှိပါတယ်.. ဒီက နွားနို့ဟာ မြို့တွေမှာလို အဆီထုတ်ထားတဲ့ နွားနို့မဟုတ်ပါဘူး.. အဆီတွေအပေါ်မှာ ဝေ့နေပြီး မလိုင်ဖတ်တွေနဲ့ ပျစ်နှစ်နေတာမို့ နံမည်ကြီးမယ်ဆိုလဲ ကြီးလောက်ပါတယ်.. အဆီမထုတ်ထားတာကြောင့် ကျန်းမာရေးအရတော့ မပြောတတ်ပေမဲ့ ပင်ကိုယ်သဘာဝအတိုင်းမို့ အရသာကတော့ ကောင်းမှ ကောင်းပါဘဲ… မြို့က နွားနို့အရသာနဲ့ ဘာဆိုဘာမှမဆိုင် ဟိဟိ 🙂 တကယ်ပြောတာပါ.. မယုံဘူးလား… ရောက်တဲ့အခါ သွားသောက်ကြည့်ပါလားနော်..
ဒါကတော့ တံမြက်စည်း လုပ်တဲ့အပင်ပါ.. ဟိုမှာတော့ သိပ်ပေါပါတယ်…
ကချင်ပြည်နယ်မှာ မြေဧက တော်တော်များများကို ကုမ္ပဏီတွေက ရာဘာတွေ သစ်မွှေးတွေ စိုက်ပျိုးနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်.. လမ်းတလျှောက် စိုက်ခင်းတွေ စိမ်းစိုနေတာကို ခြံကျယ်ကြီးတွေနဲ့ တွေ့ရပါတယ်။
Posted by oothandar on August 25, 2011 in Contemporary Experience, Variety Article
Burma Generation Oregon invites their Burmese Thagyan New Year
Maung Sein's cartoon - 01
Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity (12nd September 2010)
MoeMaKa Interview with U Win Tin - One and only NLD in solidarity
Daw Suu to coorporate with the Junta for the better good of the country
TheGeek - Uncensored Burmese Articles
soe myat nanda and phyo gyi
Ashin Pyinnyar Nanda - Mother
Invitation to the 35th Commemoration of Salai Ko Tin Maung Oo